အခ်ိန္တစ္မိနစ္ထဲနဲ႔ လွပၿပီးစတိုင္က်တဲ့ ဆံပင္စတိုင္ ေတြ ဖန္တီးၾကမယ္ - Lifestyle Myanmar
အခ်ိန္တစ္မိနစ္ထဲနဲ႔ လွပၿပီးစတိုင္က်တဲ့ ဆံပင္စတိုင္ ေတြ ဖန္တီးၾကမယ္
သင္အလွ်င္လိုေနတဲ့ အခ်ိန္ေတြေတာင္မွ လွပၿပီးစတိုင္က်တဲ့ ဆံပင္စတိုင္ ရရွိဖို႔အတြက္ ျမန္ဆန္လြယ္ကူတဲ့ နည္းလမ္းေတြရွိပါတယ္။ တစ္မိနစ္ေလာက္ အခ်ိန္ေပးၿပီး အလြယ္တကူလုပ္ႏိုင္တဲ့ ဆံပင္စတိုင္ေတြကို ၾကည့္လိုက္ပါဦး
၁။ ပံုထဲမွာျပထားတဲ့အတိုင္း ဆံပင္ကို အေပၚေအာက္ႏွစ္ခု ponytail ျပဳလုပ္ၿပီး လႈိင္းတြန္႔ေလးေတြ ျပဳလုပ္ပါ။ ဒီေန႔အတြက္ သင္အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါၿပီ။
၂။ ပံုထဲကအတိုင္း ဆံပင္ကို ponytail ပံုသ႑ာန္ျပဳလုပ္ၿပီး လိမ္လိုက္႐ံုနဲ႔ လွပၿပီး ေက်ာ့ရွင္းတဲ့ ဆံထံုးပံုစံေလး ရပါၿပီ။
၃။ အလွ်င္လိုေနတဲ့အခ်ိန္မွာေတာင္မွ perfect ျဖစ္ေနမယ့္ စတိုင္မ်ိဳးပါ၊ ပံုထဲကအတိုင္း လြယ္ကူစြာျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။
၄။ မ်က္ႏွာတဖက္ျခမ္းက ဆံပင္ကိုလိမ္ၿပီး ကလစ္ႏွစ္ခုကို ၾကက္ေျခခတ္ပံုသ႑ာန္ ထိုးလိုက္႐ံုနဲ႔ ထူးျခားလွပေနမွာပါ။
ခ်ိဳင္းၾကားနဲ႔ ခႏၶာကိုယ္ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ျဖစ္ေလ့ရွိတဲ့ ingrown hair ျပႆနာကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းမလဲ
သင့်အသားအရောင်နဲ့ ဘယ်အရောင်လေးတွေ လိုက်ဖက်သလဲ?
အဝတ်အစား ဝယ်တဲ့အခါ ကျွန်မတို့အတွက် စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုက ကိုယ့်အတွက်ကိုယ် မှန်ကန်တဲ့ အရောင်တွေ ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်အတွက်ကိုယ် အရောင်ကောင်းလေးတွေ ရွေးချယ်ရာမှာ သတိရဖို့ လိုအပ်တဲ့ အရေးကြီးဆုံးအချက်က ကျွန်မတို့ရဲ့ အသားအရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့အသားအရောင်ပေါ်မှုတည်ပြီး ဘယ်အရောင်တွေ ဝတ်ဆင်ရမယ်/ရှောင်ကြဉ်ရမယ်ကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။...
ကျွန်တော်တို့အကြောင်းကို ဖော်ပြနေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အဝတ်အစားအရောင်
စိတ်ပညာဟာ အရောင်တွေကို လေ့လာခဲ့ပြီး သူတို့ထဲက အချို့က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအချို့ မီးမောင်းထိုးပြနိုင်ဖို့ ကူညီနိုင်တာကို တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ယဉ်ကျေးမှုတိုင်းဟာ အရောင်တွေကို ကွဲပြားခြားနားစွာ နားလည်ထားကြတာကြောင့် universal rule တွေရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သင်ရွေးချယ်တဲ့ အဝတ်အစားတွေက...
သင့်အိမ်လေးကို နွေးထွေးပြီးသက်တောင့်သက်သာရှိစေဖို့ အလှဆင်ပစ္စည်း (၅)မျိုး
သင့်အိမ်အလှဆင်မှုမှာ ပစ္စည်းအနည်းငယ်ထည့်သွင်းယုံနဲ့ အိမ်လေးကို ပိုပြီးသက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား? ကိုယ့်ရဲ့ နားခိုရာအိမ်လေးက နွေးထွေးပြီး သက်တောင့်သက်သာရှိတယ်ဆိုရင် စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းပါတယ်။ အပြင်မှာ မိုးတွေရွာနေချိန် နွေးထွေးတဲ့ အိမ်လေးထဲမှာ ကော်ဖီတစ်ခွက်နဲ့ feel ရတာလောက် ကောင်းတဲ့အရသာမရှိပါဘူးနော်။ ဒါ့ကြောင့်...